के कोरोना यौन सम्पर्क बाट सर्छ? - Mitho Khabar
के कोरोना यौन सम्पर्क बाट सर्छ?
March 29, 2020 mithokhabarLeaveaComment on के कोरोना यौन सम्पर्क बाट सर्छ?
कोरोना भाइरस कपालको फोलिकल्स भन्दा १०० गुणा सानो हुन्छ। त्यसकारण, यो सजिलै शिकार बन्न सक्छ। आखिर, कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ?
कोरोना भाइरस एक व्यक्ति बाट अर्कोमा सार्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ताका अनुसार कोरोना भाइरस पीडितबाट कम्तिमा तीन फिट टाढा हुनु पर्छ। तर रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रले जारी गरेको जानकारीमा पीडित feet फिट टाढा हुनुपर्ने बताउँदछ।
यदि तपाईंले बस, रेल वा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा कोरोनरी भाइरस पाउनुभयो भने, त्यहाँ प्रसारणको जोखिम छ। ह Hongक Kongको स्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार बौद्ध मन्दिरमा आएका केही भक्तहरूले कोरोना संक्रमित भएको रिपोर्ट गरेका छन्। अहिलेसम्मको यो नयाँ प्रकारको भाइरसको साथ, यसले कसरी सार्दछ भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नुहोस्, कहाँ, कति समयसम्म यो बाँचिरहन्छ, यसबाट बच्न के गर्ने भनेर जारी राखिएको छ।
यसका साथै डाक्टरले साबुन र पानीबाट भाइरस सार्न बारम्बार हात धुने, मास्क लगाउने र विशेष गरी संक्रमित व्यक्तिलाई खोकी र छींक लाग्ने थोकबाट बाहिर निकाल्ने सल्लाह दिन्छन्।
यदि कोरोनरी ग्रस्त व्यक्तिले आफैंले खाएको छ वा कम ठाउँमा कम खाना खान्छ भने पनि कोरोना भाइरस फैलाउने खतरा हुन्छ। यस क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन कि कोरोना भाइरस, विशेष गरी, संक्रमित रहन्छ र रेलमा बस्दछ। यसबाट बच्न, उनीहरूलाई आफ्नो हात साबुन र पानीले धुनुहोस् र सेनिटाइजर लागू गर्न सल्लाह दिइन्छ। जे होस्, कोरोना भाइरस तातो खानामा निष्क्रिय हुन सक्छ।
तर अब यो डर संग, यो एक जिज्ञासा हुन सक्छ कि धेरै मानिसहरुमा लुकेको छ – वा भाइरस यौन सम्पर्क बाट संक्रमित छ कि छैन? तपाईं किन यसो भनिरहनु भएको छैन, डाक्टर? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार कोरोना भाइरस एक ‘यौन संक्रमित रोग’ होईन।
त्यसकारण, सेक्स गर्नाले कोरोना भाइरस संक्रमित हुँदैन। हालसम्म कोरोनाको यौन सम्पर्कको कुनै पुष्टि भएको छैन। त्यो हो, यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। तर सेक्सको समयमा खेल्ने सेक्स धेरै खतरनाक हुन्छ। कोरोनरी भाइरस पीडितमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ यदि उनी उपचार गरिरहेछन्।
सेक्सको बारेमा चार चीज पत्ता लगाउनुहोस्!
कोरोना जाँच गर्न प्रयोगशाला उपकरण धनगढी आइपुग्यो
आमा बुवाको लागि छोरी जस्तो छोरा, यो पढ्नुहोस आँखाबाट आ*शु झर्ने छ